Kaalmada dhalashada ilmaha kadib - InfoFinland
Nolosha Finland > Qoyska > Kaalmada dhaqaale ee qoyska > Kaalmada dhalashada ilmaha kadib
Marka uu cunuggu dhasho, waxaad taageero dhaqaale u heli kartaa daryeelista cunugga. Hooyooyinka iyo aabayaasha waxay fursad u heystaan inay in muddo ah cunugga guriga la joogaan. Waxaa kale oo mas’uulka cunugga la siiyaa lacagta kaalmada ilmaha illaa iyo inta uu cunuggu 17 sano ka buuxinayo.
Codsashada lacag-maalmeedka waalidka
Waad codsan kartaa lacag-maalmeedka haddii aad ku jirto Ceyminta bulshada Finland iyo inaad ku caymisan tahay Finlan, dowladaa kale midowga Yurub(EU) ama wadamada la daqliga ah Yurub (ETA) ama Swizerland ugu yaraan 180 maalmood oo xiriira inta ka horeysa waqtiga dhalmada laguu qabtey.
Waxaad ka codsan kartaa lacag-maalmeedka waalidka boga shabakada Kelada. Waxaad ku galeysaa lambariska aad ku gasho shabakada bankiga verkkopankkitunnus ama aqoonsiga moobeelka mobiilivarmenne. Waxaad ka heleysaa adeegaas xog sidaad u buuxin laheyd foomka. Isla ciiwaankaas ayaad ka arki kartaa hadba arrintaada xalkeedu meeshuu marayo. Markii la gaaro go'aanka codsigaaga, waxaad arki kartaa cadadda kaalmada aad heleyso iyo waqtiga aad heleyso. Adeegaas waxaad ku heleysaa afafka finnishka iyu iswiidhishka.
Sidoo kale waad codsan kartaa lacag-maalmeedka adigoo buuxinaya foomka warqada ah kadibna boostada ayaad ku diri kartaa wixii lifaaqyo oo dhana waxaad geyneysaa xafiiska Kelada. Rugta dhalaanka iyo hooyooyinka ayaad ka heli kartaa caawimo buuxinta foomka.
Cadadda lacag-maalmeedka waalidka waxay ku xiran tahay hadba daqliga ku soo geli jirey. Lacag-maalmeedka wey ka yar tahay mushaarka, inta badan waa 70 % daqligaaga. Haddii uusan dakhli ku soo gelin, waxaad heleysaa lacag-maalmeedka waalidka ee ugu yar. Tusaale ardeydu waxay qaataan midan ugu yar. Sidoo kale waalidiinta shaqo la'aanta xaq bey u leeyihiin lacag-maalmeedka waalidka.
Haddii shaqo ku siiyahaagu ku siinayo mushaar xiliga lacag-maalmeedka waalidka Kelada ayaa waxay siineysaa shaqo ku siiyahaagii lacag-maalmeedkii. Wargeli shaqo ku siiyahaaga fasaxaaga waalidnimo 2 billood kahor intaanu bilaaban fasaxa. Haddii fasaxaagu qaadanayo 12 maalmood ama ka yar, wargeli shaqo ku siiyahaaga bil kahor. Ka aqriso xog dheeriya boga InfoFinlandi Fasxyada qoyska.
lacag-maalmeedka waalidka waa in laga bixiyo canshuur, sidaa darteed waxaad u baahan tahay kaarka canshuurta (verokortti). Ka aqriso xog dheeriya boga InfoFinlandi Canshuurid.
Kaarka canshuurtaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Lacagta hooyada dhalashada ilmaha kadib
Lacagta hooyada waxay qaadan ilaa saddex billood. Waxay u bilaaabataa 30 maalmo shaqo kahor xiliga dhalmada. Ka fiirso xog dheeri ah boga InfoFinlandi Kaalmaynta hooyada uurka leh.
Markuu dhamaado xiliga lacagta hooyada, ilmaha waalidiintiisa mid kamid ah ayaa qaadan kara fasaxa waalidka. Markaa labada waalid midkood ayaa ilmihii guriga ku xanaaneenaya laguna siinayaa lacagta waalidka. Waa inaad ka codsataa Kelada ugu danbeyn bil kahor inteysan dhamaan lacagta hooyada ama aan la gaarin xiliga lacagta waalidka. Xiliga lacagta waalidka waa ilaa 6 billood, haddii reerku u dhashaan mataano, xiliga lacagta waalidka waxaa ku darsameysa 60 maalmo shaqeed.
Hooyadu waa iney soo martaa baaritaan dhakhtar 5–12 isbuuc kadib xiligii ay dhashey keentaana shahaado dhakhtarka xafiiska Kelada. Haddii kale lama siin doono lacagta waalidka.
Fasaxa waalidka waxaa qaadan kara waalidiinta mid kamid ah. Sidoo kale fasax wey ahaan karaan midba mar. Waalidku wey shaqeyn karaan qeyb qeybta kalena xanaaneyn karaan ilmha midba gelin. Keladuna markaa labada waalidba waxay siineysaa lacagta waalidka qeyb iyo qeyb.
Haddii labada waalid midkood doonayo inuu ku xanaaneeyo ilmih ii guriga xiliga lacagta waalidka kadib wuxuu heli karaa kaalmada ku xanaaneynta carruurta guriga. Ka aqriso xog dheeriya boga InfoFinlandi Kaalmada guri ku xanaaneynta ilmaha.
Lacagta waalidnimada ee la siiyo hootada ama aabahaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Lacagta aabanimada (Isyysraha) waxaa loogu talagalay aabaha cunugga xannaaneynaya. Kelada (Kela) ayaa bixisa inta lagu jiro fasaxa aabanimada lacagta aabanimada. Lacagta aabanimada waad codsan kartaa xittaa haddii aad tahay tusaale ahaan ganacsade, shaqo la’aan ama arday. Xilliga lacagta aabanimadu wuxuu qaataa 54 maalmaha shaqada ah, waa qiyaasti sagaal todobaad. Maalmahan looma wareejin karo hooyada si ay u qaadato.
Waxaad adigu go’aansan kartaa in aad qaadaneyso dhammaan maalmaha lacagta aabanimada. Waad heleysaa lacagta aabanimada haddii aadan xittaa la deganeyn cunugga hooyadiis.
Fasaxa aabanimada waxaad geli kartaa isla waqtiga ay hooyadu ku jirto fasaxa hooyada ama waalidka. Markaas waxaad qaadan kartaa ugu badnaan 18 maalmaha lacagta aabanimada ah. Waxaad sidoo kale si gaar ah u qaadan kartaa 54 maalmood ee lacagta aabanimada tusaale ahaan fasaxa waalidka kaddib.
Waxaad fasaxa aabaha u qeybsan kartaa adigoo hooyada isku waqti la qaadanaya 1-18 maalmaha shaqada ah ugu badnaan afar xilli. Fasaxa aabaha ee ka dambeeya xilliga lacagta waalidka waxaad u qeybin kartaa ugu badnaan labo xilli.
Maalmaha lacagta aabanimada waxaad u isticmaali kartaa xannaaneynta cunugga 2 sano jirka ka yar oo kaliya. Marka uu cunuggu buuxiyo 2 sano, ma isticmaali kartid maalmaha lacagta aabanimada haddii xittaa ay wax kaaga harsan yihiin.
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 23.12.2021 Boggan war-celin ka soo dir